Nepali Rajneeti | टेकु अस्पतालको आँगनमा साबित्रीको तीन घण्टा
टेकु अस्पतालको आँगनमा साबित्रीको तीन घण्टा
बिहीबार दिउँसो १२ बजे शुक्रराज अस्पताल टेकुमा ‘श्री शान्ति युवा क्लब कैलाली’ लेखिएको एम्बुलेन्स तीव्र गतिमा इमर्जेन्सी अगाडि रोकियो । हतारिंदै अधबैंसे पुरुष एम्बुलेन्सको अघिल्लो ढोकाबाट निस्किए ।
निकै हतास देखिएका उनी महेन्द्रनगरदेखि काठमाडौं आइपुग्दा घण्टौं लामो जाममा परे । यसैले जतिसक्दो चाँडो बिरामी श्रीमतीलाई जाँच गराउन चाहन्थे ।
बुधबार बिहानै महेन्द्रनगरबाट हिंडेका उनीहरू बिहीबार दिउँसो मात्र टेकु आइपुगे । ‘काठमाडौं छाड्नेहरूको जामले दाउन्ने र नागढुंगामा दुई घण्टा जाममा परियो’, भीमदत्त नगरपालिका-३ कञ्चनपुरका भीमबहादुर थापाले अनलाइनखबरसँग गुनासो पोखे ।
भीमबहादुर भन्छन्- महेन्द्रनगरका अस्पताल कोभिडका बिरामीले खचाखच थिए । बेडको त के कुरा, खोजेजस्तो परामर्श समेत पाउन सकिएन । मंगलबारदेखि अक्सिजन लेभल ८० भन्दा कम देखिन थालेपछि एम्बुलेन्सलाई मात्रै ५० हजार रुपैयाँ तिरेर काठमाडौं ल्याएँ ।
श्रीमती साबित्री थापालाई श्वासप्रश्वासको समस्या बढेपछि उनलाई लिएर थापा काठमाडौं आइपुगेका हुन् । महेन्द्रनगर बजारदेखि काठमाडौंसम्म आउन एम्बुलेन्सलाई मात्रै ५० हजार रुपैयाँ तिरेका उनले भने, ‘भाडाबाहेक ड्राइभरलाई खाना-खाजा र अक्सिजन सिलिण्डरको छुट्टै पैसा तिर्नुपर्‍यो । जसोतसो सरसापट गरेर आइपुग्यौं ।’
यो त भयो बिरामीका आफन्तको कथा । भीमबहादुरकी ४७ वर्षीया श्रीमती साबित्री थापाको स्वास्थ्य समस्या आफ्नै छ ।
पाँच वर्ष पहिलेदेखि साबित्रीलाई थाइराइड र निमोनियाको समस्या थियो । त्यसको उपचार गर्न उनी चार महिनाअघि मात्र दिल्ली पुगेकी थिइन् ।
दिल्लीका डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि खाँदै घरमै आराम गरेर बसेकी थिइन् । पछिल्लो एक महिना घरबाट बाहिर निस्केकी थिइनन् । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो ।
सोमबारदेखि उनलाई एक्कासी छाति दुख्न थाल्यो । सास फेर्न असहज भएपछि स्थानीय अस्पताल पुगिन् । तर, महेन्द्रनगरका अस्पताल कोभिडका बिरामीले खचाखच थिए । ‘बेडको त के कुरा, खोजेजस्तो परामर्श समेत पाउन सकिएन’, भीमबहादुर सुनाउँछन्, ‘मंगलबारदेखि अक्सिजन लेभल ८० भन्दा कम देखिन थालेपछि हामी डरायौं ।’
सोमबार मात्रै कोरोना संक्रमणले भाइ गुमाएकी साबित्री आँत्तिन थालिन् । यसपछि काठमाडौंमा भएका आफन्तसँग सल्लाह गरी साबित्री र उनका श्रीमान् एम्बुलेन्सबाट रातारात काठमाडौं आए । ‘महेन्द्रनगरमा सामान्य अक्सिजन सिलिन्डर र औषधि समेत पाउन सकिएन । दायाँबायाँ केही नसोची काठमाडौं आउनुपर्‍यो’, उपचारको चटारोबीच साबित्रीका श्रीमान् आफ्नो दुःख पोखिरहेका थिए ।
साबित्रीलाई काठमाडौं ल्याइने भएपछि उनका भाइ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुरज केसी पनि टेकु आइपुगे । दिदीलाई एम्बुलेन्सबाट झार्नेदेखि एक्स-रे गर्न लैजानेसम्म काम उनैले गरे ।
‘मैले एपीएफ अस्पतालमा पनि कुरा गरेँ । अन्त पनि बुझेँ तर टेकुमा सबै जाँच गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सुरुमै यता ल्यायौं’, सुरज सुनाउँछन्, ‘चिनेजानेको मान्छेलाई त बेड पाउन गाह्रो छ भने सामान्य जनताको हालत के होला !’
तीन घण्टाको परीक्षणपछि भर्ना
अस्पताल ल्याइपुर्‍याएको सुरुका तीन घण्टा त उनलाई इमर्जेन्सी भवनको आँगनमै राखेर अस्पतालकै सिलिन्डरबाट अक्सिजन दिइयो । यसअघि उनले महेन्द्रनगरबाटै ल्याइएको अक्सिजन लिइराखेकी थिइन् । यति गरेपछि साबित्री र भीमबहादुर दुवैको कोरोना परीक्षणका लागि ‘एन्टिजेन टेस्ट’ गरियो । साबित्रीको छातिको एक्स-रे जाँच गरियो, अक्सिजन लेभल समय-समयमा मापन हुन थाल्यो ।
संक्रमित बिरामीको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न अस्पताल प्रशासन लागिपरेको छ । बेड खाली नभएपनि टेकु अस्पतालले आँगनमै राखेर भए पनि बिरामी जाँच्ने, अक्सिजन दिने काम गरेको छ – डा. अनुप बास्तोला भन्छन् ।
डाक्टरहरूले करिब तीन घण्टा उनको अवस्था परख गरे । अन्ततः एन्टिजेन परिपोर्ट पोजेटिभ आएर कोरोनाका सबै लक्षण देखिएपछि मात्र साबित्रीलाई इमर्जेन्सीभित्र प्रवेश गराए । ‘इमर्जेन्सीमा सबै कोरोना संक्रमित मात्रै भएकाले हामी नयाँ बिरामीलाई त्यहाँ पठाउँदैनौं । आवश्यक जाँचपछि मात्रै भर्ना लिने-नलिने निर्णय गर्छौं’, इमर्जेन्सी विभागका प्रशासक लिलानाथ भण्डारीले अनलाइनखबरलाई भने ।
यता अस्पतालको आँगनमा डाक्टरहरूले परीक्षण गर्न थालेपछि साबित्री बिस्तारै केही राहत महसूस गर्न थालिन् । एक्स-रे गर्न जाँदासम्म उनी श्रीमानकाे हात समाएर बिस्तारै हिंड्न सकिन् । बेलाबेला मनतातो पानी आफैंले पिइन् ।
अस्पतालको आँगनमा उपचार गराइरहँदा डा. अनुप बास्तोला पनि राउण्डमा आइपुगे । उनले पनि साबित्रीको अवस्था बुझे ।
थप परीक्षण गरेपछि अपरान्ह ४ बजेमात्र उनलाई टेकु अस्पतालको वार्डमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । ‘डाक्टरहरूले जसोतसो एउटा बेड मिलाएर यहीँ भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाए । अब टेकु अस्पतालमा नै सबै उपचार गराउँछौं’, भीमबहादुरले सुनाए ।
यता, आफ्नो रिपोर्ट के आउँछ भन्ने त्रासमा छन् उनी । रिपोर्ट पोजेटिभ आयो भने सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने योजना बनाएको उनले सुनाए ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँग आबद्ध रहेका भीमबहादुर नियमित खेलकुदमा सक्रिय भएकाले उनलाई कोरोनासँग जुध्न सक्छु भन्ने लागेको छ । यसैले दत्तचित्त भएर श्रीमतीको हेरचाहमा लागेका छन् । ‘अब म पनि संक्रमित भएँ भने आफन्तलाई अस्पताल बोलाएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्छु’ उनी भन्छन्, ‘तर आजसम्म मलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन । आत्मविश्वास कम हुन दिएको छैन ।’
टेकुमा पनि बेडकै समस्या
टेकु अस्पताल परिसरमा भीड नदेखिए पनि इमर्जेन्सी र वार्डका बेड खाली छैनन् । डाक्टरका अनुसार इमर्जेन्सीमा एउटा बेड खाली हुनेबित्तिकै अर्को बिरामी आइहाल्ने गरेका छन् । बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न अस्पताल प्रशासन लागिपरेको छ । तर पनि समयमै बेड पाउन हम्मेहम्मे हुने बिरामीहरू बताउँछन् ।
यद्यपि बेड खाली नभएपनि टेकु अस्पतालले आँगनमै राखेर भएपनि बिरामी जाँच्ने, अक्सिजन दिने काम गरेको बताउँछन् डा. अनुप बास्तोला ।
बास्तोलाका अनुसार बिरामीलाई सुरुमै इमर्जेन्सीमा भर्ना गर्नुभन्दा पनि उसको जाँच गरेर प्रवेश गराउँदा बेडको समस्या हल हुन्छ । ‘धेरै बिरामी कोरोना परीक्षण नै नगराई सीधै यहाँ आउनुहुन्छ । जसले गर्दा अतिरिक्त भीड हुन्छ’ बास्तोलाले भने, ‘यसैले म सबैजनालाई कोरोना परीक्षण गराएर गाह्रो अवस्था आयो भनेमात्र अस्पताल आउनुहोला ।’
टेकु अस्पतालमा अहिले वार्डतर्फ ३० बेड, आईसीयूमा २२ र इमर्जेन्सीमा १५ बेड छन् । डा. बास्तोलाका अनुसार थोरै भए पनि बेड संख्या बढाउने क्रम जारी छ ।